Rudzi: Zvimwe zvematongerwo emabasa
Iwe unoda kuziva kuti ndiani Chikamu cheManeja? Chii chaanoita, ndeapi mabasa ake!? Chii chinotarisana nenyanzvi mune ino ndima ?! Zvakanakira nekuipira kwebasa iri ?! Tichafara kukuudza! ...
Munguva pfupi inotevera, mumwe nemumwe anopedza chikoro anotarisana nemubvunzo wekuti ndiani anotevera kudzidza. Ehe, isu hatifunge nezvevane rombo rakanaka avo, kubva vachiri vadiki, kuratidza tarenda re ...
Iko kunaka kwebasa rakapihwa kunoongororwa nekambani yega yega seimwe yeanoratidza kugutsikana kwevatengi. Ehezve, zvakaoma kwazvo kukwezva vatengi, asi chengetedzo yavo ingori yakanyanya basa. Ose maviri mabasa aya anowanzo ...
Makumi matatu apfuura, vakomana vese vaishuvira kuve cosmonauts, vatyairi, mapurisa. Zvaitendwa kuti izvi zvinongova zvehunyanzvi zvevarume, nepo mudzidzisi kana mukadzi ari munhukadzi. Parizvino…
Vamwe vadzidzi uye vana vechikoro vanofarira kushanda sa postman. Iri basa rinogamuchira wongororo dzakasiyana siyana. Asi kazhinji, vane chirevo chakashata. Sei? Chii chinofanira kuitwa na positimeni? Ndeapi mabasa emushandi uyu? ...
Ndiani ari oilman? Basa "mafuta": tsananguro, maficha ekudzidzira uye zvinonakidza chokwadi
Kunyangwe mukuru chaiwo Fyodor Dostoevsky akaburitsa chirevo chechiporofita: "Mune ramangwana, nyika ichatongwa nevanhu veparafini." Kufanana nevose vakuru, aive akarurama. Nyika ine yakawanda kana zvishoma shoma inochengeterwa mafuta negesi inogona ...
Mutengesi wekutengesa ibasa rakakurumbira uye rinodaidzwa. Ndeapi ari mabasa emaneja wekutengesa? Sei kunyora yakanaka kutangazve? Chii chiri hunyanzvi mune iri basa? Ngatitarisei iyi yese mibvunzo ...
Munhu wega wega anotsvaga kuzvipa nemamiriro ekugara akasununguka. Asi mari haizongowira muhomwe dzedu. Kuti uwane iwo, iwe unofanirwa kuzvipira kune rako basa, gadzira ...
Ichi chinyorwa chichatarisa kune rimwe remabasa ane hunyanzvi. Anoshanda wezvinhu ibasa rakakosha uye rakaoma. Ese maficha eiri basa anozokurukurwa mberi. Ndiani anokosha ...
Basa ndiro danho rakakosha muhupenyu kune chero munhu. Ino ndiyo nguva yaunotanga kuita chimwe chinhu chine mutoro, kuunza rubatsiro rwemagariro, kutora danho rekuronga ramangwana rako, zuva rako rekushanda. For…
Nhasi, epamusoro fashoni mabasa ane hukama nerunako uye indasitiri yemafashoni, nekuti anenge munhu wese anoedza kutaridzika kunge akanaka. Kuti uite izvi, haugone kuita pasina nyanzvi mumunda we cosmetology. Kunze kwekudaro…
Vazhinji vachiri kuyaruka vanofarira zera iro rinoshanda paMcDonald's: pazera regumi nematanhatu kana kune rimwe zera. Mutemo unoti kudii? Nyika yega yega ine zvimwe zviitwa zvemutemo zvinodzora basa ...
Unyanzvi hune hukama nehupfumi hwakanyanya kukoshesa mumusika wevashandi nhasi. Iyi nharaunda yakawanda kwazvo zvekuti inofukidza dzinenge nzvimbo dzese dzekuita kwevanhu. Tsvaga kuti ndeapi maprofessional ane hukama nehupfumi? Ngatirambei tichifunga ...
Mubvunzo wekuti ungawana sei basa muhofisi yemuchuchisi unonetsa pfungwa dzemagweta mazhinji. Chekutanga, ino nzvimbo ine mukurumbira, iyo ine maitiro akanaka kune hunhu hwemunhu. Uye chechipiri, muhoro wemuchuchisi unokutendera kuti ugare zvakanaka ...
Kurongeka kukuru idambudziko guru. Musoro wekambani haazove nenguva pese pese, kunyangwe nerubatsiro rwevatevedzeri. Kuronga zuva nemazvo, kusakanganwa chero chinhu, kugovera uye kudzora basa, maneja anoda mubatsiri. Than…
Munyika yanhasi, chinzvimbo chemari chemakambani mazhinji, madiki uye makuru emabhizimusi emabhizimusi anga ari pamusika kwenguva yakareba uye vagara niche yavo, zvine njodzi. Izvo zvese zvine mhosva yekugara uchisvetuka mumakosi ...
Ndiani mutungamiri? Unyanzvi mabasa emukuru
Mutengi wemazuva ano anonyanya kusarudza nezve mhando yemasevhisi akapihwa. Naizvozvo, nzvimbo ino iri kugara ichivandudzwa. Chinzvimbo chemubatiri chiri kuwedzera mukurumbira. Saka, nhasi mazhinji ezvitoro, makirabhu, masalon ane mu ...
Funga nezvehunyanzvi hune hukama nekombuta. Chinyorwa chakanyanyisa. Zvakadaro, kunyora zvese zvese hakubatsiri. Pane kudaro, isu tinotsanangura izvo zvakakurumbira uye zvinovimbisa. Mushure mezvose, iyi ndiyo chete nzira ...
Basa "Director": tsananguro, zvayakanakira nezvayakaipira
Midhiya, varaidzo muchimiro chemafirimu, mitambo, mitambo, mitambo yemitambo nezvimwe zvakadaro zvazove chikamu chehupenyu hwedu. Iye zvino hatigone kufungidzira kuti taizorarama sei uye ...
Izvo zviri nyore kwazvo kushanda mukugadzira kana vasiri vepasi chete, asiwo mamaneja pachavo vanoziva zvakajeka mabasa avo. Mazhinji emakambani, sekutonga, akapatsanurwa kuita mashopu kana zvikamu, zvine yakanyanya ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 1,086 masekondi.